မောင် (စွယ်စုံကျမ်း): နေရာခြင်း လဲချင်သူ..
"အာ.. ညီမကလည်း…. အစ်ကိုတို့ ဒီလောက်တောင် ခင်နေပြီပဲ.. အကို့ကို မယုံတာလား.."
"အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူး.. ညီမ မတွေ့ချင်ဘူး.. ညီမ လာတွေ့လို့မရဘူး.."
"ဘာလို့ လာတွေ့လို့ မရတာလဲ.. အိမ်ကမလွတ်တာလား.."
"အဲ့ဒီလိုလည်း မဟုတ်ပါဘူး…. အကို မသိတာတွေ အများကြီး ရှိပါသေးတယ်…"
"အကို မေးခွန်းတွေ မေးမယ်… ညီမ အကိုမေးတာ ဖြေနိုင်ရင် အပြင်မှာ မတွေ့ဘူး..၊ မဖြေနိုင်ရင်တော့ အပြင်မှာ တွေ့ကြမယ်…"
"အကို အခုဝတ်ထားတဲ့ အင်္ကျီဘာအရောင်လဲ…"
"အနီရောင်လေ… T-shirt လေး.."
"အကို့ ဘောင်းဘီ ဘာအရောင်လဲ…၊ အကို အခု ဘာလုပ်နေလဲ.."
"အကို ပုဆိုးဝတ်ထားတယ်..၊ အညိုရောင်လေး..၊ အခုက အကို ကော်ဖီသောက်ရင်း စာရိုက်နေတယ်…"
"အကို့ အခန်းထဲမှာ ဘာပစ္စည်းတွေရှိလဲ…"
"စာကြည့်စားပွဲ၊ TV၊ ဂစ်တာ၊ ဗီဒို..၊ ထိုင်ခုံ ၂ လုံး…၊ တစ်လုံးက ကြိမ်ခုံလေး…ဟိ..ဟိ…."
"နောက်ဆုံးတစ်ခုမေးမယ်.... မင်း … ဘယ်သူလဲ…."
"အကို ..ဘာလို့ အဲ့လောက်ထိ ကြောက်သွားရတာလဲ…"
"အမှန်အတိုင်းပြောရင် ညီမကို မခင်တော့မှာ ကြောက်တယ်.."
" ညာနေတာက ပိုဆိုးတယ်.. အမှန်အတိုင်းပြောပါ…"
"ညီမက …….. လူမဟုတ်ဘူး…"
"ညီမ နာမည်.. ဆုသက်ဝေ..၊ နေတာက တောင်ဒဂုံ၊ ညီမ အသက် က ၂၀၊ ညီမ ဆုံးတာ ဒီနေ့က ၁ လ ပြည့်တဲ့ နေ့ပဲ…"
"ညီမ ဖုန်းနဲ့ အင်တာနက်သုံးရင်း လမ်းဖြတ်အကူးမှာ ကားတိုက်ခံရပြီး.. အဲ့ဒီစိတ်နဲ့ပဲ ခုလိုဖြစ်နေရတာ…"
"ညီမ လိပ်စာပေးလိုက်မယ်..၊ သွားစုံစမ်းကြည့်လိုက်…"
"မင်းမဟုတ်တဲ့ တစ်ကယ် ကားတိုက်ခံရတဲ့သူရဲ့ လိပ်စာကို မင်းက ပြောပြလို့ ရတာပဲလေ.. "
"ဒါဆို.. အကို့ပါးစပ်ကလေ… ဆုသက်ဝေရေ…၊ ညီမကို အကို့ခြံဝန်းနဲ့ အခန်းထဲကို ၀င်ခွင့်ပြုပါတယ်လို့ ပါးစပ်ကနေ သုံးခါပဲ ရွှတ်လိုက်.. အကို့ ရှေ့ ညီမရောက်လာမယ်…."
"အကိုကြောက်နေတယ်မှတ်လား..၊ အကို ဘာမှမပြောပါဘူး..၊ ညီမသိတယ်…"
"ဆုသက်ဝေရေ…၊ ညီမကို အကို့ခြံဝန်းနဲ့ အခန်းထဲကို ၀င်ခွင့်ပြုပါတယ်.."
"ညီမနဲ့ နေရာလဲပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါပဲ အကို…"
ကျွန်တော်လည်း အခုတော့ ကျွန်တော်နဲ့ Chat မယ့် online သူငယ်ချင်းကို ည ၁၂း၀၀ နာရီထိုးသည်နှင့် လိုက်ရှာနေမိတော့သည်။
Author Maungssk at 3:05:00 PM